Archive du 20171204
Marc Ravalomanana Tonga dia miasa avy hatrany…
Nanatanteraka fambolen-kazo tany Mahereza ny mpino FJKM ny sabotsy 2 novambra teo, ka lohalaharana ny filohan’ny komitim-pankalazana ny faha-50 taona Marc Ravalomanana.
Rajaonarimampianina sy ny HVM Mihorohoro amin’ny vahoakan’Antsiranana
Mety hahemotra amin’ny volana aprily ny fihaonambem-paritry ny antoko HVM tokony hatao ny 15-16 desambra any Antsiranana. Loharanom-baovao iray no nandrenesana, fa tsy faly tamin’ilay fihaonambem-paritra tany
Rajaonarimampianina Nanatsara resaka tamin’ny mpitsara
Sahia mandray andraikitra ianareo mba hampisinda ny ahiahy sy ny fanakianana avy amin’ny fiarahamonina momba ny fitsarana. Io no tenin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpikambana avy ao amin’ny filankevitra
Tontolo politika Nitsangana ny “GASY-MI”
Niampy iray indray nanomboka ny sabotsy teo ny fikambanana sy ny antoko politika misy eto Madagasikara.
Fitondrana HVM Mitady fiaraha-miasa amin’ny Japonais
Nigadona any Tokyo Japon omaly alahady 3 desambra tamin’ny 3 ora tolakandro eto Madagasikara (7 ora hariva any an-toerana) ny delegasionina Malagasy tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Manatanteraka fitsidihana ara-panjakana any an-toerana ny filoha,
Mpandrindra ny Federalista any Antsiranana Voatendry i Atiky Soulaïmane Tsiresy Houssen
Na tsy mbola nodinihina tao amin’ny parlemanta roa tonta (antenimieram-pirenena sy antenimierandoholona) aza ny volavolan-kevitra federaly dia miezaka mametraka ny olony manerana ny nosy ny RFM (Rassemblement des Fédéralistes de Madagascar).
RaMalagasy vontom-pinoana, Malagasy tia mivavaka Miandrandra mafy isak'alahady, miandry foana valim-bavaka Vitsy no mivangabao, trano fiangonana feno hipoka Miredona aleloia, mihira mafy tsara ritsoka.
« Maison de la Charité » Tongarivo Notoloran’ny minisiteran’ny mponina fitaovana
Nomarihina omaly alahady 3 desambra ny andro iraisam-pirenena ho an’ireo olona manana fahasembanana, nifantoka betsaka amin’ny fiombonana sy ny ady amin’ny fanilikilihana eo amin’ny fiarahamonina ny fankalazana izany tamin’ity taona ity,
Birao iraisam-pirenena momba ny asa Miady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona
Miezaka manao ny asany ny birao iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT amin’izao fotoana manoloana ny ady atao amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona.
Antanetibe Ilafy Tanin’olon-tsotra 24 ha misy misoloky
Mihamahazo vahana hatrany ny resaka ady tany eto amintsika. Voakasik’izany manokana ny etsy Antanetibe Ilafy, distrikan’Avaradrano.
Mpanendaka tratra teny Itaosy Hitokona ny fianakaviany
Ny sabotsy 2 desambra 2017, tokony ho tamin’ny 12 ora sy fahefany maraina dia nisehoana trangana asa fanendahana teny amin’ny faritra Bemasoandro Itaosy, ka olona telo no voaendaka.
Marathon International de Tanà andiany faha-17 Nanjakan’ny atleta Malagasy
2 andro be izao dia ny sabotsy 2 sy alahady 3 desambra no nanatontosana ny hetsika Marathon Internationale de Tanà nokarakarain’ny Federasiona Malagasin’ny Atletisma niaraka tamin’ny World Trade Center ary ny fiombonan’antoky ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Basikety - tompondaka nasionaly N 1 A Nanomboka tamin’ny sabotsy ny lalao miverina
Nanomboka tamin’ny sabotsy 02 desambra 2017 teo tetsy amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina ny fiadiana ny ho tompondaka nasionalin’ny taranja basikety N 1 A lahy sy vavy. Ekipa lehilahy miisa 14 ary Vehivavy miisa 12 no mandray anjara amin’ny fifaninana.
Rugby Kianja Makis Nanatrika teny an-toerana i Daniel Blondy
Niditra teo amin’ny andro faha-9 ny fifaninanana ny lalao rugby D-1 Elite Fédérale karakarain’ny “Comité Technique Fédérale” tantanan’Atoa Randrianarisoa Rija notontosaina teny amin’ny kianjan’i Makis Andohatapenaka omaly alahady 3 desambra 2017.
Hotsarain’ny tantara !
Fiteny zary efa mahazatra ny Malagasy ny hoe : « aleo ny tantara no hitsara » na ny hoe « aleo ho hitan’ny havany eo ».
Smart Center Sehatra manasongadina ny teknolojia
Miezaka ny manavao ny tolotra omeny ireo tranobe fivarotana maro eto amintsika, ho fanatsarana ny sehatra asa misy azy, toy ny « Lai Bao Center » etsy Analakely. Ankoatra ny toerana malalaka izay mirefy 2 000 m² isaky ny ambaratongany, dia hisy koa rihana telo vao hisokatra tsy ho ela.
Fampandrosoana ny firenena Hanome ny tsara hatrany ny JCI Madagasikara
Federasionina goavana hikambanan’ny tanora sady olom-pirenena mandray andraikitra maneran-tany ny JCI na ny « Jeune Chambre Internationale ».
Mitombo ny fivarotana goavana eto Antananarivo Voatokana ny “La Chapelle” eny Analakely
Notokanan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo ny sabotsy lasa teo ny Tranombarotra lehibe « La Chapelle » eny Analakely.
Vondrona CPE Mankalaza ny faha-20 taona niorenany
Feno 20 taona omaly alahady ny vondrona CPE manerana ny Nosy, izay fanta-daza loatra eo amin’ny sehatry ny fanabeazana.
Bekilojy-Betroka Dahalo 2 maty, basy 2 tratra
Dahalo miisa 3, mpiray tsikombakomba 2 (mpimasy ny iray) ary mpamatsy fitaovam-piadiana sady mpanadio omby halatra na ilay antsoina hoe dahalo ambony latabatra iray no voasambotry ny zandarimariam-pirenena ao Betroka noho ny asan-dahalo niseho ny 22 novambra 2017 tao Bekijoly,
Trafikana taolam-paty Olona 6 voasambotra teny Soavina
Efa-dahy sy roa vavy no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny Commissariat Central Tanjombato teny Soavina Atsimondrano ny sabotsy 2 desambra 2017 teo, tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasany hariva niaraka tamin'ny taolam-paty miisa 250 izay milanja 35 kilao.
Robert Mugabe Nisarahan’ny vadiny
Tsy metimety amin’i Gucci Grace vadin’ny filoha Zimbaboeana teo aloha ny tsy maha filoha an’ity farany intsony koa fantatra fa nametraka ny taratasy fangatahana fisaraham-pananmbadiana ramatoa.